Waa Kuma Brahmanandam (Leeleefow Ama Isbatoore isku dhuuq?) Wax Ka Ogoow Nolosha Jilaagan - iftineducation.com
Waa Kuma Brahmanandam (Leeleefow Ama Isbatoore isku dhuuq?) Wax Ka Ogoow Nolosha Jilaagan
aadan21 / March 22, 2017
iftineducation.com – Ninka soomaalida ay utaqaano leeleefow ama isbatoore isku dhuuq magaciisa dhabtaah waa brahmanandam.
Brahmanandam kanneganti wuxuu dhashtay koowdii febraayo 1956. Waa atoore jilaa ah waliba dhanka shactirada, kaaso lagu yaqaano inta badan filimda koonfur hindiya ee soomaalida sanadadan dambe aadka uxiiseeyaan. Waa mid kamida jilayaalka ugu shactirada badan ee ebid india soomaray.
Brahmanadam Iyo Noloshiisa hore:
Wuxuu kudhashtay xaafada chaganti vari palem waa koonfur hindiya waxuu wax kasoo bartay Collegeka Andhara University isagoo ku qalin jabiyay suugaanta Telugu. wuxuu ahaan jiray macalin Telugu ah kaasoo xiligaas dadka wax kubari jiray tuulada attili lagu magacaabo.
Filim jilista wuxuu kusoo biiray sanadii 1987. Filimkiisi ugu horeyay kaaso telugu ahaa waxaa la dhaha ‘Aha Na Pallenta.’
Abaal Marinada uu Ku Guuleystay:
Bishi janaayo Sanadkii 2009 dowlada hindiya waxay gudoonsiisay abaal marinta Padma Shri, taaso ah abaal marinta afaraad darajo ahaan ee lasiiyo muwaadin india ah. Sido kale FilimFare Awards ayuu ku guuleystay sanadii 2002 qeybta shactiroolaha ugu fiican.
Wuxuu kaloo heystaa 5 Nandi Awards ah, 6 CineMAA Awards ah iyo waliba 3 National Filim Awards ah iyo kuwa kaloo badan.
Brahmanandam wuxuu heystaa iskoor caalami ah kaaso ah in uu kasoo muuqday in kabdan 1000 filim oo Telugu ah.
Brahmanandam Iyo Noloshiida Gaar Ka Ah:
Canab Sharaf love is very nice
Wuxuu Ugu Hanjabay Inuu Facebook Dhigi Doono Sawiradeeda Qaawan Ee Uu Ka Haayo Haddii Aysan Arrintaan U Sameyn! Balse Maxaa Qabsaday Ninkaan?